देबेन्द्र कार्कीको बैगुनी मायाँ बजारमा
बारा / बाराका चर्चित गायक देबेन्द्र कार्कीको बैगुनी मायाँ बोलको लिरिकल भिडियो सार्वजनिक भएको छ । यूट्युवमार्फत् कार्कीको बैगुनी मायाँ सार्वजनिक भएको हो । गीतकार सन्तोष देउजाको शब्द, संगीतकार विकास पाण्डेको संगीतमा गीत बजारमा आएको हो । बिनय केतुको संगीत संयोजन रहेको गीतलाई अशोक महर्जनले मिक्सिङ गरेका छन् । लिरिकल भिडियोलाई एसएस पटेलले बजारमा ल्याएका […]
प्रेममा भिखारी र राजा बराबर हुन्छन् !
विशेषगरी युवायुवतीमाझ लोकप्रिय ‘भ्यालेन्टाइन्स डे’ अर्थात् प्रणय दिवस । पाँचौँ शताब्दीबाट प्रेम उत्सवका रुपमा मनाउन थालिएको हो । यो दिवस पादरी सेन्ट भ्यालेन्टाइनको सम्झनामा हरेक फेब्रुअरी १४ मा मनाउने गरिन्छ । भ्यालेन्टाइनको प्रेमप्रतिको बलिदानीको सम्मान स्वरुप प्रेमिल युवा जोडीले यो पर्वका पमा मनाउने गरेका छन् । रोमन साम्राज्यका तत्कालीन सम्राट क्लाउडियस तृत्तीयलाई आफ्ना सैनिकहरू प्रेम […]
पशुपतिले बजारमा ल्याए नयाँ गीत ‘जता नि चोर’
हेटौंडा, २ फागुन । चर्चित लोकगायक पशुपति शर्माले ‘लुट्न सके लुट’ भाग (२) गीत ल्याएका छन् । शर्माको ‘जता नी चोर’ बोलको गीत बिहीबार युट्युबमा सार्वजनिक भएको हो । उनले यसअघि ल्याएको ‘लुट्न सके लुट’ गीत शब्द र दृश्यका कारण विवादित बनेको थियो । ‘जता नी चोर’ गीतको शब्द, संगीत र स्वर पनि गायक शर्माको […]
यसरी मनाए वामदेव गौतम र मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रेम दिवस
काठमाडौं, २ फागुन । आज फेब्रूअरी १४ भ्यालेन्टाइन डे अर्थात् प्रणय (प्रेम) दिवस । यो दिवसका अवसरमा विशेषगरी आपसमा प्रेम साटासाट गरेर मनाउने गरिन्छ । केही वर्ष पहिलेसम्म नेपालमा नयाँ र तन्नेरी पुस्ताले मात्रै मनाउने यो दिवस पछिल्लो समय सबै उमेर समुहका मानिसहरुले मनाउन थालेका छन् । युवा, विद्यार्थी, चलचित्रकर्मी हुदै अहिले राजनीतिककर्मीले समेत यो […]
प्रणय दिवसः प्रेम पोख्‍न रानीमहल
पाल्पा, २ फागुन । आज प्रेम दिवस अर्थात् भ्यालेन्टाइन्स डे । प्रेमको प्रतीक रानीमहलमा विशेष जमघट छ। प्रेम साट्नेहरू बिहीवार नै पाल्पाको रानीमहल पुगेका छन्। रानीमहल प्रेमको प्रतीक मानिन्छ। पूर्वाधार निर्माण भएपछि प्रेम जोडीको उपस्थिति बाक्लिँदै गएको छ। प्रेम दिवसको अवसरमा हेटौंडाका आशिका खनाल र सुरज खनाल बुधबार रानीमहल दरबार पुगे। ‘यहाँ आउनासाथ प्रेमको आभास […]
काठमाडौँ, २ फागुन । विश्वभर फेब्रुअरी १४ तारिखका दिन भ्यालेन्टाइन डे अर्थात् प्रेम दिवस मनाइँदैछ । नेपालमा पनि केही वर्षयता प्रेम दिवसलाई युवा युवतीले विशेष चाडकै रूपमा मनाउन थालेका छन् । यो दिन प्रेमिप्रेमिकाले एक अर्कालाई उपहार दिएर माया दर्साउने र प्रेम प्रस्ताव राख्ने गर्छन् । आजका दिन प्रेमको प्रतीक मानिने रातो गुलाब दिएर आ–आफुनो प्रेमी–प्रमिकालाई ‘ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन […]
आदित्यले जब टोनी कक्करलाई ‘साला साहेब’ भने (भिडियो)
काठमाडौं, २४ माघ । टिभी होस्ट आदित्य नारायण झा र चर्चित बलिउड गायिका नेहा कक्करको विवाह फेब्रुअरी १४ मा हुने पक्का भएको छ। नेहा कक्करका दाजु टोनी कक्करले बिहीआर एउटा भिडियो पोस्ट गर्दै यसको खुलासा गरेका हुन्। हुन त यसदेखि नै फेब्रुअरी १४ मा यी जोडीको विवाह हुने चर्चा थियो। भिडियोमा टोनीले आदित्यलाई फेब्रुअरी १४ […]
नयाँ दिल्ली, २४ माघ । हिन्दी फिल्ममा वर्षौसम्म प्रेमकथा फिल्मको ‘रीढको हड्डी’ अर्थात ब्याक बोन रह्यो । तिनमा कथाको अन्त्य हुँदासम्म हिरो हिरोइनसँगको मिलनले पूर्णता पाउँथ्यो । बीचमा कुनै भिलेन वा गुण्डा आए अथवा हिरोइनका पिताजी देखिए, तिनीहरू फिल्ममा प्रेमका बीच हलुवामा बालुवा भइदिन्थे । ‘मुगल–ए–आजम’मा शहंशाह अकबरले अनारकली र सलीम बीचको प्रेममा खुबै ढुँगाबाजी गरे […]
आदित्य र नेहाको विवाह पक्‍का
मुम्बई, २३ माघ । इन्डियन आइडल सिजन ११ मा निकै समयदेखि आदित्यनारायण र नेहा कक्कडको जोडीको चर्चा भइरहेको छ। अब यी जोडीले विवाह गर्ने कुरा पक्का भएको छ। सोनीले यी दुई रोमान्स गरिरहेको एक भिडियो सेयर गरेको छ। जारी गरिएको एक भिडियोमा यी दुई ‘काटे नहीं कटते दिन ये रात’ बोलको गीतमा नृत्य गरेका छन्। […]
मकवानपुरगढी–८ मा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरदेखि साँस्कृतिक कार्यक्रमसम्म
हेटौंडा, २२ माघ । मकवानपुरगढी गाउँपालिका वडा नम्बर ८ बुढीचौरमा यहि माघ २५ गते साँस्कृतिक कार्यक्रम हुने भएको छ । ल्होछारको अवसरमा माघ २५ गते बुढीचौरमा साँस्कृतिक कार्यक्रम र निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरलगायत विविध कार्यक्रम हुने भएको हो । ल्होछारको अवासरमा हुने साँस्कृतिक कार्यक्रममा झाक्री नाच प्रदर्शन, ताम्वा काईतेनद्धारा तामाङ इतिहासको चर्चा र स्थानिय तथा राष्ट्रिय […]
मकवानपुरगढी–१ मा साँस्कृतिक कार्यक्रम तथा ल्होसार मेला हुँदै
मकवानपुर, २१ माघ । मकवानपुरगढी गाउँपालिका वडा नं. १ मा रहेको रानीवास कृषि पर्यटन (एग्रोटुरिजम) पार्कमा बृहत साँस्कृतिक कार्यक्रम तथा ल्होसार मेला हुने भएको छ । २८५६ औं सोनाम ल्होसारको अवसर पारेर यहि माघ २४ गतेदेखि तीन दिनसम्म सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा ल्होसार मेलाको आयोजना गर्न लागेको पार्क विकास समितिका अध्यक्ष तथा वडाध्यक्ष आइत सिं लोले […]
<< Older 12345 … 17 Newer >>